NoFap Survival Kit / Mega Motivator - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အဆိုပါ NoFap Survival Kit / Mega လှုံ့ဆော်
Fapstronauts မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သာကျွန်ုပ်နှင့်တူပါကလှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေရန် (သို့) သင်၏ခရီးစဉ်အတွင်းမိမိကိုယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်အတွက်သင်အခက်တွေ့နေနိုင်သည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ကိုကူညီဖို့ NoFap Survival Kit ကိုစုစည်းတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
သန့်ရှင်းသောလိင် Channel ကို - nofap နှင့်ပတ်သက်သော Youtube channel ။
NoFap အကယ်ဒမီ YouTube ကို Channel ကို - တရားဝင် NoFap YouTube ချန်နယ်။
TED ကိုဆွေးနွေးပွဲ: အဆိုပါဂရိတ် Porn စမ်းသပ်မှု - တစ်ဦး nofappers အဘို့ကိုတွေ့မြင်ရပါမည်
TED ကိုဆွေးနွေးပွဲ: အဘယ်ကြောင့်ငါ Porn အကဲခတ်ရပ်သွား
NoFap ကိုငါဘာလို့စတည်ထောင်တာလဲ၊ ဘာလို့ငါဘယ်တော့မှရပ်မသွားဘူး
တနင်္ဂနွေအပေါ် Relapse ရှောင်ကြဉ်ဖို့ကိုဘယ်လို
NoFap နှင့်အတူအောင်မြင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက် Key ကို: အဆိုပါမာစတာကငျြ့
NoFap နှင့်အတူ Low Energy
Desire Rewire လုပ်နည်း
"ငါရှုပ်ပွနေတယ်, ငါ့တိုးတက်မှုအားလုံး undo ခဲ့သလား ??"
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ (ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏သိပ္ပံ) Stop လုပ်နည်း
၄၀ ရက် NoFap စမ်းသပ်မှု - ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ
အဆိုပါတရားဝင် NoFap ဝက်ဘ်ဆိုက်
အခုတော့ဒီအဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပါသည် NoFap ဖို့အရေးအပါဆုံးသော့ခ။ NoFap ထဲကိုသင်ရောက်နေပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးလား။ ကောင်းပြီ၊ အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်။
NoFap သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွန့်လွှတ်ရုံတင်မကဘဲ (ဟုတ်ပါသည်၊ အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ... ) NoFap သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထက်တောင်ကောင်းမွန်ပါတယ်.
သင်မည်သူပြောင်းလဲပါ။ သင်တို့တွင်တပိုကောင်းတဲ့ဗားရှင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အသစ်သောအခွင့်အလမ်းများအပေါ်ကိုယူပါ။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်လုပ်ပါ။ နည်းလမ်းအသစ်ဘဝကိုခံစားပါ။ ဒီနေရာတွင်လုပျနိုငျအချို့သောအရာဖြစ်ကြ၏:
လေ့ကျင့်ခန်း - ကွန်ပျူတာကိုမကြာခဏပြန်ဖွင့်ပါ။ အလုပ်ထွက်သွား တစ်ပြေးသည်သွား။ ဒီပပျောက်ရေးတိုက်တွန်းချက်ကသင့်ကိုပိုပြီးကျန်းမာစေပြီးငါ့ကိုယုံကြည်စေမှာပါ။ သငျသညျ သာ. ကောင်းသည်ဟုခံစားရလိမ့်မည်!။ ပြည်သူ့သင်ပိုကောင်းကြည့်ရှုသတိပြုမိရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်အနေနဲ့ခြုံငုံမြင့်မားတဲ့ငါပေးမည်။
Eat Better - ပိုကောင်းတဲ့စားပါ။ ဒီအကြောင်းကိုတောင်မစဉ်းစားနဲ့။ မီးဖိုချောင်သို့သွားကာငှက်ပျောသီးသို့မဟုတ်ပန်းသီးတစ်လုံးကိုယူလိုက်ပါ။ McDonalds တွင် Big Mac ကိုသိမ်းဆည်းမည့်အစားသင့်အတွက်ချက်ပြုတ်ရန်ကြိုးစားပါ။ မင်းငါ့ကိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ! ဒါ့အပြင်ဒါကမင်းသမီးတွေကိုအထင်ကြီးစေလိမ့်မယ် မျက်တောင်ခတ်စှပွေခွငျး.
အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုရွေးပါ - ဤဘဝ၌သင်နေထိုင်နေစဉ်သင်ခန်းစာယူစရာများများစွာရှိသည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကြည့်ခြင်းအားသင်၏အချိန်ကိုမဖြုန်းတီးပါနှင့်။ အချိန်တိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးကိုလုပ်ပါ၊ တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပါ။ မင်းရဲ့ဘဝအဆုံးမှာမင်းပြန်လှည့်ပတ်ပြောဆိုနိုင်ချင်တယ် “ ဟင့်အင်း၊ ငါအဲဒါကိုအသုံးချပြီးဘာမှနောင်တမရခဲ့ဘူး”။ အသစ်ကဝါသနာတက်ကောက်နေ Start! , ပန်းချီကိုတက်ယူချက်ပြုတ်, အခြို့အကြီးစာအုပ်တွေဖတ်ပါ။ ငါသည်အမြင့်မားအသစ်တစ်ခုဘာသာစကားတက်ကောက်နေအကြံပြုသည်။ ကျွန်မဂျပန်သင်ယူခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးကြောင့်အစဉ်အမြဲငါလုပ်ခဲ့တယ်ကိုအကောင်းဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ။ ဒါဟာတစ်ခုလုံးအသစ်သောယဉ်ကျေးမှုမှငါ့မျက်စိဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စူပါပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ဘာလုပ်!
ရေတန်ချိန်သောက်ပါ - ကျွန်ုပ်သည်အသံမထွက်နိုင်ကြောင်းသိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏စကားကိုယူပါ။ အထူးသဖြင့်တစ်နေ့လုံးအထီးကျန်ဆန်နေလျှင်သင်သောက်သုံးရန်မလွယ်ကူပေ။ တတ်နိုင်သမျှသောက်ပါ။ မင်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ် သင်နိုးသောအခါတစ်ခွက်သောက်ပါ။ ဒါဟာနိုးထမှုကိုအလွယ်တကူဖြစ်စေနိုင်ပြီးသင်ပိုမိုတက်ကြွစွာခံစားရလိမ့်မယ်။ သင်၏အိပ်ရာအနားတွင်ရေအနည်းငယ်နှင့်အိပ်ပါ။
ကောင်းသောညအိပ်စက်ခြင်းကိုရယူပါ - စောစောစီးစီးအိပ်။ စောစောထရန်ကြိုးစားပါ။ တစ်ည 7-9 နာရီရိုက်ပါ။ မင်းဟာအနားယူနေပြီးတစ်နေ့တာကိုရင်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ခံစားလာရလိမ့်မယ်။
လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း - လူ ဦး ရေ ၇ ဘီလီယံရှိသည်။ သွားလုပ်ပါ။ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဘာဖြစ်နိုင်သမျှအဆိုးဆုံးလဲ။ သင်ကြိုးစားလျှင်သင် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေမည်!
ဘဝရှိသေးငယ်သောအရာများကိုခံစားကြည့်ပါ -“ တစ်နေ့မှာမင်းတို့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေဆိုတာနားလည်လာလိမ့်မယ်။ ”
ငါနောက်ပိုင်းတွင်ဤစာရင်းတွင်ဖို့ပို add ပါလိမ့်မယ်။ မှတ်ချက်များအတွက်မဆိုအကြံပြုချက်များထားသူတို့ကိုငါ add မည်!
ဤတွင်အကျိုးကျေးဇူးများစာရင်းနှင့် NoFap မှပြောင်းလဲမှုများကိုသတိပြုမိသည်။ ဤစာရင်းအတွက်အကြွေးအားလုံးသည်အခြား Reddit အသုံးပြုသူထံသို့ ၀ င်သည် (အကောင့်ဖျက်လိုက်သည်။ မည်သူမဆိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ) ဤအကြောင်းရင်းများအားလုံးနှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်နောက်တဖန်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှု?
ပိုကောင်းတဲ့အိပ်မက်ပြန်လည်သိမ်းဆည်း / ပိုပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအိပ်မက် (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အိပ်မက်)
သငျသညျ fap ချင်တဲ့အခါ, သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုအဘယ်ကြောင့်အဆင်ပြေဘာဖြစ်လို့အပေါ်အချို့သော bullshit နှင့်အတူပေါ်လာလိမ့်မယ်။ “ ငါ့စနစ်မှထွက်ရန်နောက်ထပ်အချိန်တစ်ခုပဲ”“ စနေ၊ တနင်္ဂနွေအကုန်ငါစမယ်”“ တစ်ချက်တည်း”။ Nope ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အားတင်းထားသည်!
သင်၏ဘ ၀ ၌ NoFap ကိုစတင်ရန်ယခုအချိန်ထက် ပို၍ ကောင်းသောအချိန်မရှိခဲ့ပါ။ သင်ကကြောက်စရာကောင်းတယ် မင်းကမြည်းကိုကန်တယ်။ ငါတို့အားလုံးမင်းနဲ့အတူရှိနေပြီးမင်းကိုအားပေးနေတယ် သငျသညျဖွစျစနေိုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။